နနေိုငျအောငျနပွေီးတဲ့အခါမှ ပွနျပျေါမလာပါနဲ့တော့ … – Shinyoon
နနေိုငျအောငျနပွေီးတဲ့အခါမှ ပွနျပျေါမလာပါနဲ့တော့ …
ဝေးမယျဆိုရငျလဲ တဈသကျလုံး ဘယျတော့မှမဆုံအောငျ ဝေးကွတာပဲကောငျးပါတယျ မဟုတျရငျ အသားကအြောငျနခေဲ့တဲ့ အခြိနျတှပွေီးမှ ပွနျပွီးပျေါလာခဲ့ရငျ ဒဏျရာတှေ အသဈပွနျဖွဈတာပဲ ပိုပါတယျ အရငျလိုပွနျမဖွဈနိုငျတော့တဲ့အခါ အရငျလိုပွနျပွီး ယုံကွညျဖို့ရာက မလှယျလှဘူးလေ ….
ကိုယျ့အနားက မပြျောလို့ထှကျသှားခဲ့တာပဲလေ …ရောကျလရောမှာ ပြျောပြျောမပြျောပြျော အဆငျပွအေောငျနတောကောငျးပါတယျ ခနျြထားခဲ့တုနျးကလဲ နာကငျြခဲ့ရပွီးပွီ ထားမသှားပါနဲ့ဆိုပွီးလဲ မာနတှလေဲခခြဲ့ပွီးပွီ နနေိုငျအောငျ ကွိုးစားခဲ့ပွီးမှတော့ ပွနျပျေါမလာစခေငျြတော့ဘူး
ခနျြထားခံရမယျ့ကံဟာလဲ တဈခါဆိုလုံလောကျသငျ့ပွီထငျပါတယျ … နောကျတဈခေါကျပွနျလာပွီးရငျ ကိုယျ့ထကျသာတဲ့သူ ထပျရှိရငျ နောကျတဈခေါကျထပျပွီး ကနျြခဲ့ဦးမှာပဲလေ ဘယျအခြိနျ ကနျြခဲ့ရမလဲ တှေးကွောကျနရေတာထကျစာရငျ ထပျပွီး မနီးစပျတော့တာဟာ အစှဲအလမျးကွီးတတျတဲ့ကိုယျ့အတှကျ အကောငျးဆုံးသော အဖွဖွေဈမှာပါ …
အဆငျပွမေယျထငျလို့ ဒီရငျဘတျကို နငျးခခြေဲ့ပွီးပွီပဲ တခွားအရပျမှာ ပြျောသညျဖွဈစေ မပြျောတော့ဘူးဖွဈစေ အဆငျပွသေညျဖွဈစေ မပွဘေူးဖွဈစေ ကိုယျ့ရှေးခယျြမှုနဲ့ကိုယျလို့သာ ဖွပေါ ကိုယျရှိတဲ့အရပျကိုတော့ ဘယျတော့မှ ပွနျလညျ့မလာခွငျးဖွငျ့ပဲ ကူညီပေးတာကောငျးပါတယျ လုံလောကျတာထကျပိုပွီး နာကငျြခဲ့ရပွီးသလို
တဈခါသေးဖူးတဲ့ကိုယျ့မှာ ပဉျြဖိုးကောငျးကောငျးနားလညျနပေါပွီ …
နေနိုင်အောင်နေပြီးတဲ့အခါမှ ပြန်ပေါ်မလာပါနဲ့တော့ …
ဝေးမယ်ဆိုရင်လဲ တစ်သက်လုံး ဘယ်တော့မှမဆုံအောင် ဝေးကြတာပဲကောင်းပါတယ် မဟုတ်ရင် အသားကျအောင်နေခဲ့တဲ့ အချိန်တွေပြီးမှ ပြန်ပြီးပေါ်လာခဲ့ရင် ဒဏ်ရာတွေ အသစ်ပြန်ဖြစ်တာပဲ ပိုပါတယ် အရင်လိုပြန်မဖြစ်နိုင်တော့တဲ့အခါ အရင်လိုပြန်ပြီး ယုံကြည်ဖို့ရာက မလွယ်လှဘူးလေ ….
ကိုယ့်အနားက မပျော်လို့ထွက်သွားခဲ့တာပဲလေ …ရောက်လေရာမှာ ပျော်ပျော်မပျော်ပျော် အဆင်ပြေအောင်နေတာကောင်းပါတယ် ချန်ထားခဲ့တုန်းကလဲ နာကျင်ခဲ့ရပြီးပြီ ထားမသွားပါနဲ့ဆိုပြီးလဲ မာနတွေလဲချခဲ့ပြီးပြီ နေနိုင်အောင် ကြိုးစားခဲ့ပြီးမှတော့ ပြန်ပေါ်မလာစေချင်တော့ဘူး
ချန်ထားခံရမယ့်ကံဟာလဲ တစ်ခါဆိုလုံလောက်သင့်ပြီထင်ပါတယ် … နောက်တစ်ခေါက်ပြန်လာပြီးရင် ကိုယ့်ထက်သာတဲ့သူ ထပ်ရှိရင် နောက်တစ်ခေါက်ထပ်ပြီး ကျန်ခဲ့ဦးမှာပဲလေ ဘယ်အချိန် ကျန်ခဲ့ရမလဲ တွေးကြောက်နေရတာထက်စာရင် ထပ်ပြီး မနီးစပ်တော့တာဟာ အစွဲအလမ်းကြီးတတ်တဲ့ကိုယ့်အတွက် အကောင်းဆုံးသော အဖြေဖြစ်မှာပါ …
အဆင်ပြေမယ်ထင်လို့ ဒီရင်ဘတ်ကို နင်းချေခဲ့ပြီးပြီပဲ တခြားအရပ်မှာ ပျော်သည်ဖြစ်စေ မပျော်တော့ဘူးဖြစ်စေ အဆင်ပြေသည်ဖြစ်စေ မပြေဘူးဖြစ်စေ ကိုယ့်ရွေးချယ်မှုနဲ့ကိုယ်လို့သာ ဖြေပါ ကိုယ်ရှိတဲ့အရပ်ကိုတော့ ဘယ်တော့မှ ပြန်လည့်မလာခြင်းဖြင့်ပဲ ကူညီပေးတာကောင်းပါတယ် လုံလောက်တာထက်ပိုပြီး နာကျင်ခဲ့ရပြီးသလို
တစ်ခါသေးဖူးတဲ့ကိုယ့်မှာ ပျဉ်ဖိုးကောင်းကောင်းနားလည်နေပါပြီ …